Man United oo badisay iyo Tottenham oo afka ciida loo daray+SAWIRRO – Gool FM
Man United oo badisay iyo Tottenham oo afka ciida loo daray+SAWIRRO
( Premier League ) 02 September 2018. Laba gool uu dhaliyay weeraryahanka Romelo Lukaku ayaa dib ugu soo celisay united wada guusha markii ay 2-0 kaga adkaadeen kooxda Burnley
Qeybta hore kulanka ayaa lagu kala maray 2-0 oo ay ku hogaamineysay naadiga Manchester united.
Goolka daah furka dheesha ayaa yimid daqiiqadii 27-aad waxaana u dhaliyay Romelu Lukaku markii uu kubbad diib qurxoona ka helay laacibka Alex Sanchez madax fiicanna ku hubsaday goolka Burnley.
Intaa kaddib kulanka ayaa noqon day laba dhinac ay sameeyeen fursado halisa walow ay gacan sareysan naadiga United.
Cayaarta oo socota daqiiqadii 44-aad ee dhamaadka qeybta kowaad markale Romelu Lukaku ayaa goolka u gaaray Manchester united kaddib kubbad uu haley afka hore gooka.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyada dambe naadiga Burnley ayaa wax ka badshay cayaartooda inkastoo ay ku adkaatay inay halis galiyaan goolka De Gea.
United ayaa loo dhigay rigoore waxaana la lumiyay laacibka Paul Pogba taasoo qaladkeeda lagu galay laacibka Rashford
Daqiiqadii 74-aad laacibka Marcus Rashford ayaa cayaarta laga saaray oo qaatay casaan markii uu si bareer ah madaxa ugu dhuftay daafaca Burnley Phil Bardsley.
Romelu Lukaku ayaa laga badbaadiyay fursad uu ku dhalin lahaa seddaxley markii uu si farsameyay ku maray goolhayaha balse uu ka daba daafaca Burnley Ben Mee kasoo ugu dambeyn ka hor istaagay kubbadii uu damacsanaa inuu goolka ku shuudo.
Fursadii ugu fiicneed ee soo martay Burnley ayaa waxaa laga badbaadiyay Ashley Barnes kaddib markii uu madax la haleeyay kubbad diib aheyd laakiin De Gea oo meel haboon taagnaa ayaa si wacan gacanta ugu dhigay.
Dhanka kale Tottenham ayaa guul darro kala kulantay Watford oo la joojin la yahay taa oo soo wada adkaatay afartii kulan ay ciyaartay.
Goolka hore waa la hormartay kooxda Tottenham waxaanu ahaa gool kama’ ah uu iska dhaliyay laacibka Abdoulaye Doucoure laakiin goolal ka kala yimid xiddigaha Troy Deeney iyo Craig Cathcart ayaa u saamaxay kooxda Watford in xili dambe ay guul ka xaqiijiso Spurs waxayna lee yihiin 12 dhibcood afarta dheel ilaa haatan la cayaaray horyaalka.
Pogba oo Manchester United u sheegay goorta uu ka tagayo iyo kooxda uu ku biirayo!!